कांग्रेसमा पनि छन् अरिंगाल
२०७५ असोज २५ बिहीबार ०४:५७:००
असोज २१ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेको संघको विधान २०२७ सातौं संशोधन २०७५ लाई पन्छाएर विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गर्दै छुट्टै विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु गलत हो । त्यस दिनको बैठकमा म जान पाइन । तर राम्रो शैली अपनाइएन ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेताहरुसँग सल्लाह गरेर काम गरेको भए यस्तो विवाद हुने थिएन, समस्या आउने थिएन । तर, उहाँले पेलेर जान खोज्नु भएजस्तो देखियो । यो मामिलामा सभापति दोषी हो कि होइन भन्दा पनि सर्वोच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति भएकोले उहाँले सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामी पनि विद्यार्थीको उमेरको हद तोक्ने पक्षमा नै छौं । विद्यार्थी भनेको एउटा उमेर समूहका युवा नै हुन् । विद्यार्थीको तोकियो अब पार्टीका नेताहरुको पनि तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको सुनियो । तर, पार्टी नेपाली कांग्रेस भनेको एउटा विचार बोक्ने समूह हो । त्यसैले नेतृत्वको पनि उमेर हद तोक्नु पर्छ भन्न मिल्दैन ।
पार्टी सभापति सानो गुट र गिरोहबाट चल्नुभयो । उहाँले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुगर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । आफ्नो गिरोह बाहेकका नेताहरुसँग समेत उहाँले छलफल गरेको भए यस्तो विवाद उत्पन्न हुने थिएन । नेविसंघकै बारेमा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जानुअघि नै छलफल गरेर निचोड निकालेको भए विवाद यसरी छताछुल्ल हुने थिएन । तर, उहाँहरुले यसो गर्न चाहनु भएन । त्यही भएर समस्या उत्पन्न भएको हो ।
कांग्रेसमा पनि अरिंगाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीले काम गर्न दिएन, ‘अरिंगाल जस्तै जाइलाग’ भन्ने निर्देशन हालै कार्यकर्तालाई दिनुभएको थियो । अहिले कांग्रेसमा पनि सभापति नजिककाहरुले पार्टी भित्रका विपक्षीले काम गर्न दिएनन् भनेर त्यस्तै खालको आरोप लगाएको देखिन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानले सभापतिलाई अहिले पनि धेरै अधिकार दिएको छ । चाहनु भयो भने उहाँले काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा नै छैन । तर, पार्टीभित्रका विपक्षीलाई उहाँले दोष दिने गर्नुभएको छ । त्यसले गर्दा पार्टीमा समश्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
कोइराला परिवार ‘हिन्दू राज्य’मा लागेको हो ?
धर्म र राजनीति फरक—फरक कुरा हुन् । नेताहरुले आ—आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ । पार्टी महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाले म समेत उपस्थित रहेको एउटा कार्यक्रममा हिन्दू राज्यको पक्षमा धारणा राख्नुभएको हो । तर, कोइराला परिवार लागेको भन्न नमिल्ला । यो कुरा महासमिति बैठकमा पनि जाला । त्यहाँ छलफल होला । लोकतान्त्रिक पार्टीमा विविधता हुन्छ । नेता तथा कार्यकर्ताको फरक फरक धारणा हुन सक्छ । उहाँहरुले महासमिति बैठकमा मूल्यांकन गर्नुहोला । त्यसैले अहिले नै को हिन्दू राज्यको पक्ष वा विपक्षमा भन्न नमिल्ला । महासमिति बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
कोइराला परिवारबाट सभापति उमेदवार को ?
कोइराला परिवारले नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार तय गर्न छलफल गरिरहेको कुरा पनि बाहिर बेलाबेलामा आएको सुनिन्छ । कोइराला परिवारका हामी तीन जना भेटघाट गरेको कुरालाई लिएर यसरी हल्ला गरिने गरेको पाइन्छ । शशांक, सुजाता र म बेलाबेलामा भेट्ने पनि गरेका छौं । हामीले भेट्नै नमिल्ने भन्ने त कुरा भएन । हामी पार्टीभित्रका समस्याका बारेमा पनि कुरा गर्छौैं । बाहिरी राजनीतिको बारेमा पनि छलफल गर्छौ । अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि कुरा गर्छौं । भएको यही हो । यसैमा कोइराला परिवारले आफ्नो उम्मेदवार तय गर्न लागेको भनेर हल्ला गर्नु सुहाउने कुरा होइन ।
कोइराला परिवारका हामी तीन जना भेट्दा विभिन्न अर्थ लगाइने गरेको छ । सभापति देउवाले बोलाउनु भएको भए पनि हामी जान्थ्यौं । तर, उहाँले कहिल्यै बोलाउनु हुन्न । एक प्रकारको संवादहीनताको अवस्था छ । बोलचाल नै बन्द भएको त होइन तर महत्वपूर्ण विषयमा कहिल्यै पनि छलफल हुँदैन । छलफल गरेर निर्णयमा जाने हो भने पार्टीभित्रको समस्या समाधान नहुने भन्ने अवस्था होइन ।
(बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा आधारित)